ကုန်ကြမ်း Nandrolone Propionate အမှုန့် (7207-92-3) hplc≥98% | AASraw
/ ထုတ်ကုန်များ / ဟို steroids / Nandrolone အမှုန့်စီးရီး / Nandrolone propionate အမှုန့်
SKU: 7207-92-3. Categories: Nandrolone အမှုန့်စီးရီး, ဟို steroids
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Nandrolone Propionate မှုန့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့် (7207-92-3) မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
Nandrolone Propionate အမှုန့်ကိုဗီဒီယို
Nandrolone Propionate အမှုန့်အခြေခံဇာတ်ကောင်
အမည်: Nandrolone Propionate အမှုန့်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 453.6mmHg မှာကို C ° 760
စတီရွိုက်သံသရာအတွက် Nandrolone Propionate အမှုန့်သုံးစွဲမှုကို
Nandro P ကို, Nandro ကျားကန်ဖြင့်သင့်ကိုခေါ် Nandrolone Propionate အမှုန့်။
Nandrolone Propionate အမှုန့်အသုံးပြုမှု
Nandro (Nandrolone Propionate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်) သွေးအားနည်းရောဂါရဲ့ရင်သားကင်ဆာ, မျိုးရိုးလိုက် angioedema, antithrombin III ကိုချို့တဲ့, fibrinogen ပိုလျှံ, ကြီးထွားမှုပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်မျိုးရိုးလိုက် angioedema.Nandro (Nandrolone Propionate အမှုန့်) ၏ Turner ရဲ့ syndrome ရောဂါနှင့် prophylaxis ၏ကုသမှုများအတွက်ညွှန်ပြနေသည်အများဆုံးမှလေးထိုးသွင်းနေသည် week.At ပိုမိုမြင့်မားဆေးညွှန်းနှုန်းငါးကြိမ်, ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ပို. ပို. ပိုပြီးမကြာခဏဖြစ်လာပေမည်, သို့သော်ဤနေဆဲအလွန်ကောင်းစွာဒဏ်ခံမူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။
Nandrolone Propionate အမှုန့်အပေါ်သတိပေး
အနည်းငယ်ပုလ်အခန်းကဏ္ဍရှိပါတယ်, အမျိုးသမီးအမွေး, ဝက်ခြံ, အသံထူ, clitoral hypertrophy, amenorrhea သို့မဟုတ်ရာသီမမှန်၏အသုံးပြုမှုကိုအပြီးပေါ်လာစေနိုင်သည်။ ကဖြစ်ပျက်ခဲ့လျှင်, ချက်ချင်းဆေးဝါးကိုရပ်တန့်။ ရေရှည်လျှောက်လွှာအသားဝါခြင်းနှင့်အသည်းကမောက်ကမဖြစ်မှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ လည်းဆိုဒီယမ်ရေ retention ကိုနှင့်ဖောကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နိုင်ပါသည်။
Nandrolone Propionate အမှုန့် (ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး vs. ရလဒ်များကို) ကိုသုံးမယ့်ယောက်ျားသည်အများအပြားဟာအကောင်းဆုံးခြုံငုံ Steroid တစ်မျိုးအားဖြင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပါတယ် Nandro (Nandrolone Propionate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်) အများဆုံးတစ်ပတ်ကိုလေးလုံးမှငါးကြိမ်ထိုးသွင်းသည်။ ဤငွေပမာဏနှင့်အတူအီစရိုဂျင်ပြောင်းလဲနိုင်အောင် gyno အဘယ်သူမျှမပြဿနာပင်ဖြစ်သည်အနည်းငယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ဆန်းအသည်းအင်ဇိုင်းတွေ, သွေးဖိအားသို့မဟုတ်လက်စထရောအဆင့်ကိုနှင့်အတူပြဿနာများဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာထိရောက်စွာနိုင်ပါတယ် HIV ပိုးလေ့လာမှုများအတွက် nandrolone မှာလုံခြုံစိတ်ချစွာလူနာများ၏ပိန် bodyweight တက်ဆောင်ခဲ့ဒါပေမယ့်လည်းကိုယ်ခံစွမ်းအား system.For ကာယဗလ, Nandro (Nandrolone Propionate အမှုန့်) ကိုအကျိုးရှိသောဖြစ်ထိရောက်သောဖြစ်သာပြသခဲ့ပြီးကြောင်းကိုလည်းမှတ်သားရပါမည် နှစ်ဦးစလုံး၏အလေးချိန်မှာထည့်သွင်းခြင်းနှင့် cycles.It ဖြတ်တောက်အသည်းအပေါ်လွယ်ကူသည်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အဆီလျှော့ချနေချိန်မှာကောင်းသောအရွယ်အစားနှင့်အစွမ်းသတ္တိကိုအကျိုးအမြတ်ကိုအားပေးအားမြှောက်။
Nandrolone Propionate ရော်အမှုန့်
Nandrolone Propionate အမှုန့်စျေးကွက်
aasraw ထံမှ Nandrolone Propionate အမှုန့်ကိုဝယ်ဖို့ကိုဘယ်လို
ကာယဗလမှ AASRaw Providence သန့်ရှင်းစင်ကြယ် 98% Nandrolone Propionate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်သို့မဟုတ်
Nandrolone Propionate ရော်အမှုန့်ချက်ပြုတ်နည်း: